Mogadishu Journal » 2018 » May » 22
Mjournal :-Qarax loo adeegsaday gaari NOAH ah oo walxaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa duhurnimadii maanta waxaa lala eegtay gaari Cabdi Bille ah oo ay wateen ciidan ka tirsan kuwa Bancraf-ta, kaasi oo ka dhacay degmada Afgooye gaar ahaan aagga Baar Ismaaciil. Al-shabaab oo...
Mjournal :-Wararka ka imaanaya degmada Afgooye ee Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in qarax ismiidaamin ah oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay lala beegsaday kolonyo ciidan oo marayay agagaarka Koontaroolka Baar Ismaaciil. Sida wararku sheegayaan...
Mjournal :-Waxaa magaalada London lagu dilay 72-kii saac ee la soo dhaafay labo muwaadin Soomaali ah, kuwaasoo dilkooda loo adeegsaday Toorey. Wargeyska The Evening Standard ee ka so obaxa dalka Britain ayaa qoray in Marxuumiinta Soomaalida ee la dilay lagu kala magacaabo jirey...
Mjournal :-War-saxaafadeedkan, waxaa si wada jir ah u soo saaray: Wasiirada Wasaaradaha Hawlaha Guud ee Dawlad Goboleedyada Puntland, Jubbaland, Galmudug iyo Hirshabeelle. Sida aan wada ogsoonnahay dalkeenna Soomaaliya, wuxuu doortay ku dhaqanka nidaamka federaaliga ah. Waxaana...
Mjournal :-Madaxweynaha Maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) oo kulan gaar ah magaalada Kismaayo ee caasimadda KMG ah ee maamulkaasi kula qaatay Hay’adaha samafalka ee ka hawlgala degaanada Jubbaland ayaa eedeyn u jeediyay xubnaha uu la kulmay. Wuxuu sheegay...
Mjournal :-Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax miino oo xalay fiidkii lala beegsaday ciidamo ka tirsan dowlada Soomaaliya kuwaas marayay meel aan sidaas ugu fogeyn Isgoyska Ex Kontarool Afgooye ee magaalada Muqdisho. Qaraxa Miino ayaa lalabeegsaday Gaari ay wateen ciidamo...
Mjournal :-Ilo xog ogaal ah oo dhinaca Millitariga ah ayaa Idaacadda Risaala ee magaalada Muqdisho waxay u sheegeen in Hay’adaha ammaanka ay dad u soo qab qabteen qarax Miino oo maqribnimdii shalay ka dhacay inta u dhaxeysa Ex-control Afgooye iyo xaafada Haanta-dheer ee magaalada...
Mjournal :-Guddiga Difaaca Puntland ayaa soo saaray amaro la xiriira isu socodka gaadiidka iyo dadka, kadib kulan gaar ah oo ay yeesheen. Guddiga ayaa saraakiisha ammaanka faray in baraha kontoroolada aanay soo dhaafi karin dhammaan gaadiidka sida shidaalka ee ka imaanaya dhanka...